Latest Myanmar News - Page 124 of 142 - News & Media
ခြောက်လအထက် ကလေးငယ်များအတွက် ဖြည့်စွက်စာ လုပ်မယ်ဆိုရင်
ခြောက်လအထက် ကလေး ငယ်တွေ ကို ဖြည့်စွက်စာဂကျွေးတော့မယ် ဆိုရင် ဘာတွေထည့်ကျွေးသင့်သလဲ???? ဒီနေ့တော့ ကလေး တွေ ကို နေ့လည်စာ နှင့် ညစာ ဆန်ပြုတ်ကျွေးဖို့ အတွက် ပါဝင် ပစ္စည်းများ နှင့် ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံ 1. ကြက်သား (သို့) ငါး ကို ပြုတ်ပါ။ 2. ပဲထည့်ပြုတ်ပါ။ 3. ပဲနူးလာပြီ ဆိုရင် ကျန်တဲ့ ပစ္စည်းများ ကို ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ 4. ဆား၊ အချိုမှုန့် လုံးဝ ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ 5. နူးပြီး ပြဲနေအောင် ပြုတ်ပေးပါ။ 6. အိမ်မှာ ကြိတ်စက်ရှိရင် အခုပြဲနေအောင် ပြုတ်ထားတာတွေ ကို … Read more
တက္ကသိုလ်တွေ ဘယ်တော့ ဖွင့်ပြီး စာသင်မှာလဲဆိုတာ ကျောင်းသား/သူတွေ သိဘို့ (1)လက်ရှိ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်စာအရ တက္ကသိုလ် ဆရာဆရာမတွေသည် မေလ(18)ရက် တနင်္လာနေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်အသီးသီးကို အရောက်သွားပြီး Duty Report လုပ်ရပါမယ် (2)Duty Report လုပ်ပြီးရင် ဆရာဆရာမတွေသည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသက ဝန်ုကြီးချုပ်နှင့် ပါမောက္ခချုပ်တွေ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကြောင့် Quarartine 21 ရက်ကို ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ် ဝင်ရပါမယ်၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကတစ်ရက်(5000)ကျပ်၊ မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်က(3000)ကျပ်၊ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်က(4000)ကျပ် စသဖြင့် ပေးသွင်းပြီး Q 21ရက်ဝင်ရပါမယ်၊ (18.5.2020)မှ (7.6.2020)နေ့အထိပါ၊ (3)ဆရာဆရာမတွေ Quarartine 21 ရက်ဝင်နေသလို ထိုင်းနိုင်ငံပြန် လူတစ်သိန်းခွဲကျော်နဲ့ တရုတ်ပြန် လူတစ်သိန်းကလည်း တက္ကသိုလ်အသီးသီးက ကျောင်းသားဆောင်နဲ့ ကျောင်းသူဆောင်တွေမှာ Q 21ရက် ဝင်နေကြမှာပါ (4)ဆရာဆရာမတွေသည် … Read more
မိဘခြေရာ ခံယူနည်း မိဘခြေက္ခဏာ ခံယူပွဲသည် မြန်မာတို့၏ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်၍ မြန်မာ မိသားစုတိုင်း ခံယူကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးနှင့် ကုံလုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတို့၏ မိဘခြေရာ တောင်းယူပူဇော်နည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိဘခြေရာ တောင်းယူသောနေ့ဟာ မိဘရော သားသမီးတွေပါ မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ (သို့မဟုတ်) မွေးရက်နှင့် မှတ်တမ်းအပ်သည့်နေများတွင် ကျင်းပလျှင် ပို၍ကောင်းမွန်၏။ မိဘခြေရာတောင်းယူ မည့်အချိန်မှာ မိဘကော သားသမီးပါ ရေချိုးသန့်စင် ဝတ်ကောင်းစားလှများ ဝတ်ဆင်ပြီး ဘုရားစင် ရှေ့မှာထိုင်ပါ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေမှာ အရပ်လေးမျက်နှာ၊ အရပ်ရှစ်မျက်နှာ၊ အရပ် ဆယ်မျက်နှာရှိတဲ့ အထဲမှ အထက်အရပ်ရပ်ကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး ရတနာသုံးပါးကို ပူဇော်ကန်တော့ပါ ပြီးလျှင် အရှေ့အရပ် … Read more
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ နောက်ဆုံးခရီးစဉ်နှင့် နောက်ဆုံးမိန့်မှာချက်များ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ နောက်ဆုံးခရီးနှင့် နောက်ဆုံးမိန့်မှာချက်များ ဗုဒ္ဓသည် ပရိနိဗ္ဗာန် မစံဝင်မှီ လပိုင်းအလိုလောက်မှစ၍ သာသနာတော်ကြီးအဓွန့်ရှည်စေရေး နှင့် ရဟန်းတို့ အကျိုးစီးပွား အတွက် အမျိုးမျိုး အထူး သတိပေးမှာကြားခဲ့ပုံ၊ မိမိ မရှိတော့မည့်အကြောင်း သိ၍ ၀မ်းနည်းနေကြသော ရဟန်းတို့အား နှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့ပုံ ၊ သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ် တရားထူးရမည်ကို သိသောကြောင့် ပါဝါပြည်မှ ကုသိနာရုံပြည်အထိ ဝေဒနာခံစားနေသည့်ကြားမှ ခြေလျှင်ခရီး ကြွချီခဲ့ပုံ စသည်တို့ကို ဝေသာလီပြည်မှ ကုသိနာရုံအထိ မိုင် ၁၁၀ ခရီးစဉ်တလျှောက်အကြောင်းဖော်ပြထားသော မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ် တွင် လေ့လာကြည့်လျှင် ကြည်ညိုဖွယ်ရာ တွေ့နိုင်ပေသည်။ Bryan de Kretse ၏ Man in Buddhism and Christianity , Page 67တွင် ….”ခရစ်ယာန်ဘာသာ ၀င်ပညာရှင်တစ်ဦးကဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်များထဲ၌ … Read more
ကြာသပတေး သားသမီးလေးတွေရဲ့ ထူးခြားချက်
ကြာသပတေး သားသမီးများ (၁) နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့သူတွေပါ။ပညာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ် တတ်တဲ့ သူတွေပါ ။ (၂) ရောက်လေရာတိုင်းမှာ လူတွေရဲ့ အာရုံ ကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ အသွင်အပြင် ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ တွေပါ ။ (၃) မွေးရာပါ ခေါင်းဆောင် စွမ်းရည် ကိုပိုင်ဆိုင် ထားသူ တွေပါ ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လို အလုပ် ကိုပဲ လုပ်လုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ကို ရကြပါတယ် ။ (၄) အလုပ် အရမ်း ကြိုးစားတဲ့ သူတွေဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှု ကို ရအောင်ယူနိုင် ကြပါတယ် ။ (၅) လွတ်လွတ်လပ်လပ် ၊ အချုပ်အနှောင်ကင်းကင်း နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်တဲ့သူတွေပါ ။ … Read more
← Previous Page1 … Page123 Page124 Page125 … Page142 Next →
တရားနှင့် ဂါထာတော်များ (113)
အချစ်နှင့် ရသစာပေများ (8)
အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး (77)